Yakakosha tweak mune yekuchengetedza dhizaini yakaburitswa neApple nezuro masikati | Ndinobva mac
Yakakosha tweak mune yekuchengetedza yekuvandudza yakaburitswa neApple nezuro masikati
Uye ndezvekuti mhirizhonga nezve kutadza kwekuchengetedza ichiri kunyarara zuva rapfuura mushure mekunge kambani yeCupertino yatanga chigamba kugadzirisa dambudziko rakakomba kwazvo rekuchengetedza. Muchidimbu, chiitiko chinounza muswe kubva mushure mekutanga mhinduro yedambudziko, nhasi tinozviwana tave nazvo vhezheni itsva iyo inogadziridza yapfuura kugadzirisa kukanganisa.
Iyo bhaggi inokonzerwa nekukasira kuburitsa chigamba kugadzirisa dambudziko uye kunozviratidza kune vamwe vashandisi, kwete vese. Ndokusaka mangwanani ano gadziriso nyowani yasvika iyo inosanganisira iyo imwechete vhezheni nhamba yakaburitswa nezuro, Security Gadziriso 2017-001, asi ine akasiyana kuvaka (17B1003) uye izvo zvinonyatso kugadzirisa dambudziko.
Saka chinhu chekutanga chatinofanira kuita kana tangoona iyi nhau ndeyekuvandudza vhezheni yechigamba paMac yedu uye pane izvi isu tinofanirwa pinda Mac Mac Chitoro kana tisina otomatiki zvigadziriso zvakagadziridzwa uye kugadzirisa. Unogona kutarisa "kuvaka" kubva ku  logo uye Nezve iyi Mac, kana tangova mukati tinofanirwa kubaya kaviri pane vhezheni ye macOS High Sierra uye kuvaka kunowoneka.
Padivi pako Apple yakaburitsa chirevo ichikumbira ruregerero pane zvakaitika:
Kuchengetedza chinhu chakakosha pane zvese zvigadzirwa zveApple, uye zvinosuruvarisa kuve nekugumburwa neiyi vhezheni ye macOS. Vainjiniya vedu vezvekuchengetedza pavakaziva nezvenyaya iyi Chipiri masikati, isu takabva tangotanga kuita basa rekuvandudza gomba rekuchengetedza. Iyo yekuvandudza inowanikwa yekurodha kubva nhasi mangwanani. Uye, kutanga nhasi, ichango gadza otomatiki pane ese masisitimu anomhanya yazvino vhezheni (10.13.1) ye macOS High Sierra. Tine urombo kwazvo nezve iyi bug uye tinokumbira ruregerero kune vese vashandisi veMac, zvese nezve kuburitsa software neiyi njodzi uye nezve kunetseka kwayakonzera. Vatengi vedu vanofanirwa zvirinani. Tiri kuongorora maitirwo ebudiriro kuti izvi zvisaitike zvakare.
Zvinogoneka kuti vamwe vashandisi vane matambudziko ekuwana kuzivikanwa neiyo yapfuura vhezheni yechigamba ichi, saka zvinokurudzirwa kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni inowanikwa nekukurumidza sezvazvinogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Yakakosha tweak mune yekuchengetedza yekuvandudza yakaburitswa neApple nezuro masikati
Kubva pakuvandudzwa kwekuchengetedza, nzira yandinotanga nayo "yachinja" ... Iye zvino Mac inotanga ini kukwira kumushandisi skrini: password uyezve chena kurodha bhaa kunoonekwa ...
Zvakamboitika kwauri here? neshanduko iyi zvinonditorera nguva yakareba kuti nditange ...
Mac imbwa akadaro
Ehe. Neniwo!! Akave nemuchena mutsetse uye apuro kwemaminitsi gumi nemashanu ... handizive zvekuita !!!!!!
Pindura Mac Imbwa
Podcast 9 × 12: Apple zvakare inofanira kukumbira ruregerero